सामाजिक मीडिया पेशेवरहरु सत्य ह्यान्डल गर्न सक्दैन | Martech Zone
मैले हालसालै एउटा प्रयोग गरिरहेको छु। केही वर्ष पहिले, मैले १००% हुने निर्णय गरें पारदर्शी मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक, आध्यात्मिक, र अन्य विश्वासहरूका बारे मा मेरो फेसबुक पृष्ठ। त्यो प्रयोग थिएन ... त्यो केवल म हुँ। मेरो कुरा अरूलाई अपमान गर्नलाई थिएन; यो साँच्चिकै पारदर्शी हुनुपर्दछ। आखिर, त्यो के हो सोशल मिडिया पेशेवरहरूले हामीलाई भनेको छ, ठीक छ? तिनीहरू भन्छन् कि सामाजिक मिडिया एक अर्को संग कनेक्ट हुन को लागी यो अविश्वसनीय अवसर प्रदान गर्दछ पारदर्शी.
तिनीहरू झूट बोल्दै छन्।
मेरो प्रयोग केहि हप्ता पहिले शुरू भयो। मैले मेरो फेसबुक पृष्ठमा कुनै पनि विवादास्पद पोष्ट पोस्ट गर्न रोकेँ र ती विषयहरुमा छलफल गर्न मात्र अडियो जब अन्य व्यक्तिहरूले यसलाई आफ्नो पृष्ठमा ल्याए। यो हास्यपूर्ण हो, तर प्रयोगको परिणामले मलाई तीन निष्कर्षमा पुर्‍यायो:
म अधिक लोकप्रिय छु जब म चुप लाग्नु र मेरा विचारहरू आफैंमा राख्नुहोस्। यो सहि छ, मानिसहरूले मलाई चिन्न वा म पारदर्शी भएको चाहँदैनन्, तिनीहरू केवल व्यक्तित्व चाहान्छन्। यसमा मेरा साथीहरू, मेरो परिवार, अन्य कम्पनीहरू, अन्य सहकर्मीहरू ... सबै समावेश छन्। तिनीहरूले मेरो पोष्टसँग अन्तर्क्रिया गरे जति कम विवादास्पद छन्। अचम्म मान्नु पर्दैन किन बिराला भिडियोहरूले इन्टरनेटमा शासन गर्छन्।
धेरै सामाजिक मिडिया परामर्शदाता कुनै अन्तरदृष्टिको कमी छ तिनीहरूको व्यक्तिगत जीवन, समस्या, विश्वास, र विवादास्पद मुद्दाहरू अनलाइन। मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? तपाईंको मनपर्ने सोशल मिडिया गुरुको व्यक्तिगत फेसबुक पेजमा जानुहोस् र केही विवादास्पदको लागि खोज्नुहोस्। मेरो मतलब सार्वजनिक ब्यान्डवागनहरूमा उफ्रनु भनेको होइन - जुन उनीहरू प्रायः गर्छन् - मेरो मतलब स्थिति यथार्थमा अडान लिनु हो।
धेरै सामाजिक मिडिया परामर्शदाता आदरपूर्ण बहसलाई तुच्छ ठान्नुहोस्। अर्को पटक जब तपाईंको मनपर्ने सोशल मिडिया प्रोफेश्नल जो भाषण गर्थे वा ब्यान्डवागनमा पारदर्शिता जम्पमा पुस्तक लेख्दछ, र तपाईं उनीहरूसँग असहमत हुनुहुन्छ ... त्यसोभए तिनीहरूको फेसबुक पृष्ठमा। तिनीहरूले यसलाई घृणा गर्छन्। Less भन्दा कम पटक मलाई एक सहकर्मीले सोधेको छ तिनीहरूको पृष्ठ बन्द गर्नुहोस् र मेरो राय कतै लैजानुहोस्। अरूले मलाई नपछ्याए र मलाई प्रेम गरेनन् जब उनीहरूले पत्ता लगाए कि मसँग विपरित विश्वासहरू थिए।
मलाई गलत नबनाउनुहोस्, म भावुक छु। म एक ठूलो बहस मन पराउछु र म मेरो पंचहरु तान्न छैन। सोशल मिडिया एक दिशामा झुकाव झुकाउँदछ जबकि म प्राय: अन्य दिशामा धेरै विवादास्पद शीर्षकहरूमा झुकाउँछु। म मानिसहरूसँग असहमत हुन असहमत छैन - म केवल मेरो व्यक्तिगत विश्वासहरूको बारे इमानदार र पारदर्शी हुन कोशिस गर्दैछु। र म यथार्थपरक र अव्यवसायिक रहनको लागि यथाशक्य गर्छु ... यद्यपि म व्यंग्यमा रोक्दिन।
तपाईं प्राय अनलाइन र मिडियामा सुन्नुहुन्छ, हामीलाई इमान्दार कुराकानी चाहिन्छ। बोगस ... अधिक व्यक्ति ईमानदारी चाहँदैनन्, तिनीहरू केवल तपाईको ब्यान्डवोनमा हाम फाल्न चाहन्छन्। तिनीहरूले तपाइँलाई मन पराउनेछन्, तपाइँको अद्यावधिकहरू साझा गर्नुहोस्, र तपाइँबाट किन्नेछन् जब तपाइँले उनीहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ भनेर बुझेपछि। सामाजिक मिडिया को बारे मा सत्य हो:
तपाईं सत्य ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न।
मसँग एक मुख्य वक्ता पनि एक राष्ट्रिय कार्यक्रममा मकहाँ आए, मलाई भालु अug्गाल दिनुहोस्, र मलाई भन्नुहोस् कि उनी मलाई अनलाइन विषयहरूमा लिने अडान मन पराउँछन् ... ऊ सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्दैन। उसले मेरो फेसबुक पेजमा साझेदारी गरेको कुनै राय वा लेख कहिले पनि मनपराएन वा साझेदारी गरेन किनकि उसले मलाई पछ्यायो। म उसको मुखमा शब्दहरू राख्न चाहन्न, तर त्यसले मलाई भन्दछ कि उसको अनलाइन व्यक्तित्व फोनि हो, ध्यानपूर्वक यसको लोकप्रियता सुनिश्चित गर्न मूर्तिकार गरिएको छ जबकि आफ्नो पेचेक्सलाई जोखिममा राख्दैन।
त्यसैले म सहयोग गर्न सक्दिन तर आश्चर्यमा। यी मानिसहरू अनलाइन के भन्छन् जुन केवल लोकप्रिय हुन सिमित छ, र आवश्यक छैन सत्य हुन? जब हामी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सामाजिक मिडिया रणनीतिहरू तैनात गर्छौं, हामी प्राय: त्यो के पाउँछौं लोकप्रिय के को जस्तो प्रभाव कहिल्यै छैन एजी.
यहाँ तपाइँको लागि केही पारदर्शिता र ईमानदारी छ - धेरै सामाजिक मिडिया पेशेवरहरू झूटा हुन् र यसलाई स्वीकार्नु पर्छ। तिनीहरूले पारदर्शिताको बारेमा आफ्नो बी एस सल्लाह टस गर्नुपर्छ र कम्पनीहरूलाई भन्नुपर्दछ, यदि उनीहरू अधिकतम पहुँच र स्वीकार्यता चाहान्छन् भने उनीहरूले विवादबाट जोगिनुपर्दछ, लोकप्रियता ब्यान्डवागनमा हाम फाल्नु पर्छ, फोनि व्यक्तित्व बनाउनु पर्छ ... र नाफा बढेको हेर्नुहोस्। अर्को शब्दहरूमा - तिनीहरूको नेतृत्व अनुसरण गर्नुहोस् र झूट बोल्नुहोस्।
सबै पछि… कसले इमान्दारी र इमानदारीको ख्याल राख्छ जब त्यहाँ पैसा बनाउनु पर्छ।
टैग: इमानदार कुराकानीईमानदारीझूटाझूटसामाजिक संजालसामाजिक मिडिया परामर्शदाताहरुसामाजिक मिडिया पेशेवरहरुसत्य
Pinegrow: WordPress एकीकरणको साथ एक आश्चर्यजनक डेस्कटप सम्पादक
यसको लायकको लागि, म तपाईंको पारदर्शिता अनलाइन मन पराउँछु। यो स्फूर्तिदायी छ र म सोच्न चाहन्छु कि सम्मानजनक बहसको लागि तपाईंको चाहानालाई बुझ्नको लागि म तपाईंलाई राम्ररी चिन्छु। मलाई इमान्दार मानिसहरू अनलाइन र बन्द छन्। म तपाईंलाई आफु रहन प्रोत्साहित गर्दछु।
म एक सामाजिक मिडिया पेशेवर होइन यद्यपि केहि व्यक्तिले मलाई त्यो बक्समा राख्न मन पराउँछन्। म केवल उत्सुक छु, के तपाईं मलाई त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा वर्गीकृत गर्नुहुन्छ जो सत्य ह्याण्डल गर्न सक्दैन, बहसको मजा लिंदैन र पारदर्शिताबाट टाढा रहन्छ?
खोल, बिल्कुल विपरीत। हाम्रो मतभेद मार्फत तपाईले सँधै आदरयुक्त सम्बन्ध कायम राख्नु भएको छ! किन म तपाईंलाई धेरै सम्मान गर्छु!
ठीक डग, मँ भन्छु कि म तपाईंसँग असहमत छु, स्ट्यान्डको प्रकृति कस्तो छ र स and्लग्नताको सन्दर्भमा।
यदि तर्क वा स्ट्यान्ड एकले व्यवसायको क्षेत्र मा छ, मार्केटिंग, सामाजिक मिडिया, आदि मा दृष्टिकोण को, र कसैले असहमत वा खुला छैन सहमत जब यो विवादास्पद हो, तब तिनीहरू प्रामाणिक छैनन्।
यदि तर्क धर्म, राजनीति, व्यक्तिगत मूल्यमान्यताहरू व्यवसाय सम्बन्धी होईन, र तिनीहरू चुप लाग्दछन् भने यसको मतलब तिनीहरू फोनिरहेका छैनन् वा झूटा व्यक्तित्व जोगाउँदैछन्। मैले महसुस गरेझैं उनीहरूले महसुस गर्न सक्दछन् कि त्यहाँ फरक छलफलको लागि समय र स्थान छ।
मेरो प्रश्न हो, के तपाइँ वास्तवमै यस बारे मा आक्रोशित हुनुहुन्छ वा केवल एक व्यापक ब्रशको साथ चित्रकारी पाठकहरु लाई अधिक प्रामाणिक बनाउनको लागि? म तर्कसंगत हुन प्रयास गर्दछु र मेरो पोष्ट र प्रतिक्रियाहरूमा हाइपरबोले बेवास्ता गर्दछु, र ती भावनाहरू भरिए जस्तो काम गर्दैनन्, "व्यंग्यमा कुनै स्किम्पिing" हुँदैनन्। राम्रो कुरा म एक सोशल मीडिया गुरु छैन।
धेरै नै एक पोष्टको गडबड, यसलाई सम्पादन गर्ने मौका हुनुभन्दा अघि यसलाई बुझाउनुहोस्… मैले भनें, निश्चित रूप मा एक सोशल मिडिया गुरु छैन (विशेष गरी जब यो थाहा हुन्छ कि म कसरी आफ्नो फोनबाट बनाउने पोष्टहरू सम्पादन गर्ने ...)
आशा छ मेरो कुरा स्पष्ट थियो, त्यो व्यंग्य र भावनाले जवाफ पाउछ तर सधैं उपयुक्त वा प्रामाणिक हुँदैन।
मेरो कुरा एकदम सजिलो छ ... कि सोशल मिडियामा सल्लाह दिने प्रायः पेशेवरहरूले आफ्नै सल्लाह अनुसरण गर्दैनन्। पारदर्शिता र संचार प्रभावी छैन जबसम्म तिनीहरू इमानदार र स्पष्ट छन्। आईएमओ, प्राय जसो कारण हामीसँग अनलाइन मुद्दा छन् ती मानिसहरुको दिमागमा बोल्न असमर्थता हो र यो एक हो इमानदार कुराकानी, वा सामाजिक मिडियामा ती व्यक्तिहरूको असहिष्णुतालाई फरक मत राख्नेहरूलाई सम्मान गर्न। जे भए पनि, यसले कम्पनीहरूलाई उनीहरूका ग्राहकहरूसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न मद्दत गरिरहेको छैन - वा यसको विपरित।
यो अदालत को आदेश बाहिर छ!
म भन्छु जब तपाईले केहि व्यक्तिहरुलाई बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईले केहि व्यक्तिहरुलाई खोल्नुहुन्छ। भन्नुहोस् तपाई डग के गर्नुहुनेछ (मलाई थाहा छ तपाईं जानुहुन्छ)। पक्कै पनि त्यहाँ कपटीहरूको अड्डलहरू छन् प्रामाणिकताको बारेमा खोज्दै र त्यसपछि उनीहरूको सत्यता प्रदर्शन गर्ने सडकको बीचो बाहेक केही होइन, त्यसैले म खुशी छु कि तपाईंले यसको घोषणा गर्नुभयो।
मलाई लाग्छ कि तपाईं जहाँ याक गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईं राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो भने तपाईं मानिसहरूलाई झुक्याउँनुहुनेछ। कृपया गर्नुहोस्। सोशल मिडियाले कुराकानीलाई प्रजातान्त्रिक बनाउन मद्दत गर्ने छ, हैन?
मलाई त्यस्तै लाग्छ, ब्यारी! तर मैले याद गरे कि धेरै जना आफ्नो विश्वास बाँड्न लजाउँछन्। यो मेरो विचारमा धेरै खराब छ।
जुलाई,, २०१ at 20::2015। बिहान
दुर्भाग्यवस, पारदर्शिताको अभावमा पैसा पर्दा जस्तो देखिन्छ। राम्रोसँग लेखिएको, राम्रोसँग भनिएको छ र राम्रोसँग बाँचिएको छ।
यो एक उत्कृष्ट टुक्रा हो, डग। सामाजिक मिडिया सम्राटको कुनै कपडा नभएको भन्नु प्रामाणिक पारदर्शिताको अभिव्यक्ति हो।
तर मलाई लाग्छ आलोचनाको लागि "सामाजिक मिडिया परामर्शदाताहरू" बाहिर खेल्ने कार्य धेरै नै संकुचित छ। एक सामाजिक मिडिया आउटस्ट्याक भएको डरले हामी बीचमा सब भन्दा विद्रोही तर सबै द्वारा साझा सीमित गर्दछ।
त्यहाँ केही शंका छैन कि सोशल मिडियाले अनुरूपता र राजनीतिक शुद्धता लाई बढावा दिन्छ। यो केवल मध्यम प्रकृति हो।
यो सत्य हो कि समस्या विस्तृत छ ... तर यो ती मानिसहरू हुन् जसले प्रचार गर्छन् र भुक्तानी गरिन्छ कि म औंला औंला गर्दैछु।
मैले कसरी सम्बोधन गरेको छु कि म लिंक्डइनमा व्यावासायिक फेसबुकमा राख्छु। ट्विटर दुबै को एक हल्का मिश्रण प्राप्त गर्दछ। नतिजाको रूपमा, म को अधिक साथी छ वा म फेसबुक मा मित्र अनुरोध स्वीकार को लागी धेरै चयन छ। म तिनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई चिनेको चाहन्छु र, यसैले, तिनीहरू प्रायः मेरो विचारहरू र / वा उनीहरूलाई थाहा छ कि म आदरपूर्ण छलफल वा बहसको आनन्द लिन्छु।
यस दृष्टिकोणको साथ, मैले पाएँ कि म आफ्नो विचारहरू साझेदारी गर्न सक्छु र छलफलमा संलग्न हुन सक्छ जबकि अझै मेरो सम्बन्धहरू राख्दछु।
त्यसकारण तपाईंले आफैंलाई सेन्सर गर्नुपर्नेछ किनकि केहि मानिसहरू असहमत हुन्छन् र तपाईका विश्वासहरूका बारेमा तपाईलाई न्याय गर्ने पनि हुन्छन् ... तपाई जेसुकै आदर गर्नुहुन्छ पनि। मलाई थाहा छ। 🙂
मलाई थाहा छैन म सेन्सरशिपको रूपमा यति धेरै विभाजनको रूपमा सोच्नेछु। :) '
यो वास्तवमै सोच विचार गर्ने पोष्ट थियो। व्यवसाय संलग्न भएको बेलामा म कत्तिको इच्छुक छु? के मेरो स्थितिले मेरो साथ व्यापार गर्ने वा मसँग व्यापार गर्ने कसैलाई अपमान गर्दछ? म अनलाइन सामाजिक सामानमा राम्रो छैन त्यसैले म नियमित आधारमा पोष्ट नगर्ने झुकाव राख्छु। मेरी आमाले मलाई राजनीतिक र धार्मिक विषयहरूबाट टाढा बस्न भन्नुहुन्थ्यो। प्राय: जसो व्यक्तिसँग तथ्या information्क जानकारी, विचार र गफ (एफओजी) हुन्छन्। माटोमा फसेको जस्तो बहस त्यहि हो जहाँ गफ र राय हुन्छ। ममा विषयवस्तुमा आफ्ना भावनाहरू लुकाउन को लागी तर्क को रूप मा छ। धेरै व्यक्तिहरूले समान चीज गर्छन्। यो केवल जब म मेरो भावनाहरू (र अरूले पनि समान) एक शीर्षकमा जाँच गर्न सक्दछु जुन म एक राय र गफबाट टाढा जान सक्दछ र एक उत्पादक कुराकानी गर्न सक्छ। एक विचार प्रेरणादायक पोस्ट को लागी धन्यवाद डग!
धन्यवाद! र म सहमत छु ... म चाहन्छु कि हामी भेदभावको सम्मान गर्न र बहसबाट भाग्न रोक्न पर्याप्त बहादुर हौ। यस देशमा यस्तो धारणा देखिन्छ कि तपाईं कि त मसँग हुनुहुन्छ वा मेरो बिरूद्ध ... बरु म भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ।
विचारहरु को एक जोडी म सक्छ भने।
१. मानव आदिवासी हुन् र आदेश र दक्षताको लालसा गर्छन्। तिनीहरू ती आदेश मन पराउँदैनन् जसले लगातार अर्डरलाई बाधा पुर्‍याउँछन् र उजाडस्थानमा तिनीहरूलाई निकालिदिन्छन्। सामाजिक मिडियामा पनि यो सत्य हो। कुनै पनि माध्यमले दुई-दुई वर्षमा हजारौं वर्षका इन्ग्रेनड व्यवहारलाई हटाउँदैन। मानव मिडिया * आन्दोलनले मानव * वास्तवमा * एक अर्कासँग कुराकानी गर्ने तरीका परिवर्तन गरेको छैन। बरु, यो मानव को लागी एक गहिरो आदिवासी आवश्यकता अनलाइन पूरा गर्न को लागी एक बाटो भेट्टाएको छ। यसैले यो एक रकेट जस्तै उडान। यो नयाँ छैन। यसले केहि सक्षम पार्छ जुन धेरै, धेरै पुरानो हो।
२. मैले हालसालै सोचें कि यसलाई 'डिजिटल' युग भन्नुको सट्टा भविष्यका इतिहासकारहरूले १21995 to देखि २०2030० सम्मका वर्षहरूलाई 'नारिसिज्मको युग' भनेर सम्बोधन गर्नेछन्। मैले माथि टिप्पणी गरेझैं वेब र सोशल मिडिया परिवर्तनका चालक होइनन्, ती केवल मिडिया हुन् जसले व्यक्ति र जनजातिलाई के सोच्छ र महसुस गर्दछ भन्ने कुरालाई सक्षम र प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो धेरै प्रारम्भिक डिजिटल युगमा, हामीले वास्तवमा सामाजिक मिडियालाई सबैको लागि "१ame मिनेट प्रसिद्धि" भन्ने प्रबोधकलाई साँचो गहिराइ र दिगो सामाजिक परिवर्तनको सट्टामा प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरेका छौं। पहिले जस्तो रेडियो र टेलिभिजनसँग, सोशल मिडिया द्रुत रूपमा आफ्नो छविहरू (उदाहरणका लागि, डोनाल्ड ट्रम्प) लाई बढाउनको लागि एक मुखै बन्न पुगेको छ र मुख र कुञ्जीपाटी भएका सबैका लागि 'विचार नेता' बन्न, वा 'परिवर्तन एजेन्ट ', वा' ग्रोथ ह्याकर '। हामी लगातार नयाँ बजवर्ड खोजको खेल खेल्दैछौं भनेर देखाउन कि हामीसँग नयाँ विचारहरू छन् (फेरी ... ग्रोथ ह्याकि)), र हामी सोच्ने नेताहरूको रूपमा प्रशंसा गरिनु पर्दछ। हामीले शब्दहरू सस्तो गरेका छौँ, 'प्रतिभा', 'विचार नेता', 'गुरु' र अन्य। यो देखिन्छ कि लिंक्डइनमा प्रत्येक अन्य व्यक्ति माथिको मध्ये एक वा बढी हो, यद्यपि उनको / उनको प्रख्यात दाबी उनको / उनको परिवारको पुष्प व्यापार वेबसाइटलाई 'ओभरल' गर्न र उनीहरूलाई सीईओ सीढीमा माथि सार्ने थियो। नम्रता र नैतिकता यस समयमा मुख्यतया पश्चात्तापहरू हुन्, जबकि प्रसिद्धि र व्यक्तित्व दिनको मुद्रा हो। मलाई लाग्छ कुनै समय नयाँ बिग हुनेछ जब एक पटक 'बिग बैंग' लाग्यो, तर त्यसबेला सम्म, यो प्रायः मेरो बारेमा हो र म कसरी तपाईंलाई मेरो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्छु।
मेरो $ २
उत्तेजित गर्ने सोच तर मैले यो पनि जोडें कि प्रायः ती मानिसहरु जसले सुनुवाई छोडिन्छन् र जसलाई 'नारिसिस्टहरू' भनिन्छ जुन मानवतालाई अग्रसर गर्दछ। यदि तपाईं बथानको केवल एक हिस्सा हुनुहुन्छ भने, तपाईं समस्याको हिस्सा हुन सक्नुहुन्छ!
यस्तो देखिन्छ कि तपाईंसँग पहिले नै एसएम विज्ञहरू यस पोष्टमा तपाईंसँग बहस गर्दैछन्। के त्यस प्रकारले पोइन्ट प्रमाणित गर्दैन?
हो! हो यसले गर्छ।
म ब्यारी फेल्डम्यानसँग छु। "... जब तपाईं केहि व्यक्तिलाई बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईं केहि ब्यक्तिहरुलाई सक्रिय पार्नुहुन्छ।" मैले सँधै कायम राखेको छु कि मेरो विचारहरू मेरो आफ्नै हो र मेरो सामाजिक च्यानलमा अरू कसैको छैन। र म मेरो साथीहरु लाई बोलाउन मन पराउँछु जसले मेरो दृष्टिकोण साझा गर्दैनन्। तर मँ तपाईंसँग सहमत छु कि त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले बहसमा संलग्न हुन डराउँछन् र सुरक्षित रूपमा खेल्छन्। तिनीहरू मसँग सहमत पनि हुन सक्छन तर फेला पर्न सक्ने डरको लागि त्यो "मनपर्दो" बटनमा थिच्ने छैन। म ती मध्ये एक होइन। मलाई एजी मानिस र ब्रान्ड मन पर्छ।
मलाई लाग्छ भिन्नता केहि मानिसहरु अरु विश्वास को लागी उनीहरूको विश्वास आवाज यदि तिनीहरूले सहमत छैन भने। मैले अर्को दिन कसैलाई पछ्याउन छोडे जुन मैले वास्तवमै आदर गर्थें किनकि उसले ट्वीट गरेको थियो "इडियट्स जसले विश्वास गर्छन्…" र म त्यस्तै एक "मूर्ख" हुँ। मलाई लाग्छ कि संसारले बिर्सिसकेको छ कि हामी असहमत हुन सक्छौं जबकि अझै अरूले समान तथ्यहरूबाट फरक निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्ने कुरामा सम्मान गर्दै।
यस्तो ठूलो पोइन्ट। हामी चाहन्छौं कि हामी यस देशमा सम्मानजनक असहमति फिर्ता ल्याउन सक्दछौं।
मैले धेरै कुराको लागि स struggle्घर्ष गरेको कुरा यो हो कि प्रकाशनहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई रूख लिनको लागि भुक्तान गरिन्छ, एक व्यवसायिक व्यक्तिको रूपमा तपाईले सम्भावित सम्भावना र ग्राहकहरूलाई जोखिममा पार्नुहुन्छ। पक्कै पनि मैले पारदर्शिताको प्रचार गरेको छैन त्यसैले म सोच्छु कि म स्पष्ट छु 😉
यो सत्य हो। म पक्का छु कि मेरो ग्रान्टले मलाई केही ग्राहकहरू र संभावनाहरू गुमाएको छ। यद्यपि, म मान्छेहरूसँग काम गर्न चाहन्छु कि मैले सम्मान गरे कि म भन्दा भिन्नै दृष्टिकोण हुन सक्छु। यो पक्कै गाह्रो छनौट हो।